Nagarik News - अफेयरको चर्चाले फाइदा!
अफेयरको चर्चाले फाइदा!
08 Jan 2015 | 08:57am
बिहीबार २४ पुष, २०७१
काठमाडौं– ‘तपाईंहरुको प्रेमप्रसंगले पूरै फिल्मलाई ओझेलमा पारेन?' नेपालभर रिलिजको तयारी पूरा भएको जानकारी गराउन ‘आभाष' फिल्मको पत्रकार सम्मेलनमा जब अभिनेत्री आश्मा डिसीलाई सोधियो, केहीबेर उनी रनभुल्लमा परिन्। स्थितिलाई सम्हाल्दै उनले दुई तुकको तर मीठो जवाफ दिइन्, ‘चाहे चर्चा राम्रो होस् वा नराम्रो, त्यसले हाम्रो जोडी र फिल्मलाई नै चर्चामा नै ल्याउने हुनाले हाम्रो प्रेमप्रसंगको चर्चाले फिल्मलाई फाइदा नै पुर्यासएको छ।'
राजधानीको मार्कोपोलो होटलमा बुधबार फिल्मका निर्माता गोविन्द शाहीले प्रचारप्रसार तीव्र रुपमा गरिएको र आफूहरु फिल्मको रिलिजका लागि आतुर भएको बताए। युवाहरुको मनस्थितिमा आधारित फिल्म बनाइएको निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए तर अरुको विषय र यो फिल्मले उठाएको कथानकमा आकाश–जमिनको फरक रहेको पनि जनाए। ‘यस्तो कथा नेपाली फिल्ममा अहिलेसम्म मैले हेर्न पाएको छैन, त्यसैले बनाउन तम्सेको हुँ,' पौडेलको कथन थियो।
३५ दिने सुटिङ अवधिमा आफूले कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्नु नपरेको पौडेलले बताए। यो उनको पहिलो निर्देशकीय प्रयास हो। उनले यसअघि ‘लूट', ‘जेरी', ‘होस्टल'जस्ता हिट फिल्मको सम्पादन गरिसकेका छन्। उनको सम्पादन कौशलबाट प्रभावित भएर नै निर्देशनको जिम्मा दिएको निर्माता शाहीले बताए।
कार्यक्रममा संयम पुरी र निशा अधिकारी भने देखिएनन्। निशा विभिन्न महोत्सवमा र संयम फिल्मको सुटिङमा व्यस्त भएको जानकारी दिइएको थियो। फिल्ममा संयम पुरी, सलोन बस्नेत, आश्मा डिसी, निशा अधिकारी आदि कलाकारको अभिनय रहेको छ।
« मलिना बन्ने भो ‘झम्की' बाह्र वर्षपछि निर्मात्री करिश्मा »